WARARKA MAANTA 5ta Abriil 2020 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Yaa runta qarin kara maanta? Maxay #NISA u qorxinaysaa Madaxda Dowlad Gobaleedka Puntland? Maxay tahay sababta uu Maal-Geliye Argagixiye Fahad Yaasin Daahir “Daba-Naasle” Taliyaha Hay’adda Nabad-Sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka u amray in loo hanjabo Weriye Haruun Macruuf oo hanjabaadaas loogu qoray khatka bogga #Twitter ee #NISA? Maxuuse Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo “Been-Hawaas” u rabaa in la khaarajiyo Madaxweynihii hore Mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo uu ka cabsi qabo inauu kurgiga Madaxweynenimadda ku guullaysto mar kale 2021? Maxuu Ciidanka #Ethiopia u soo geliyey #Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”? Ma qaadato lacag luulaash iyo musuqmaasuq ah Boqortooyadda Saxaafadda Soomaaliya/Boqortooyadda Warbaahinta Soomaaliya Madaxweyne Mudane Farmaajo marka iska-casil xukunka iyo siyaasadda dalka waad ku fashilantay oo #Ethuiopia waxba kuuma qaban karto? Yaa Garoowe qarxiyey? Yaa la dooran doonaa Madaxweynaha Soomaaliya 2021 Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed rumayso ma ha rumaysan? Maxay beesha caalamka xiriir toos ah hadda ula samaysatay Madaxweynihii hore Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed? Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda 2021? Maxay tahay sababta #Madaxweyne Farmaajo u keenay #Ethiopia Soomaaliya? Maxayse tahay sababta aysan labada aqal iyo guddoomiyayaashooda uga hadli sababta si sharci-darrada ah ee ay Ciidanka #Ethiopia ku soo galeen Soomaaliya? Yaa la khaldi karaa? Ha Wiqleyso!
Muqdisho 5ta Maarso 2020 Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barta twitter-ka uga hadashay eedeynta ay hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA u jeedisay weriye Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta Af-Soomaaliga VOA ee ay leedahay dowladda Mareykanka.
6:50 AM – Apr 5, 2020
Maamulka Dowladda Puntland 5ta Maarso 2020Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta qarax nooca gawaarida lagu dhajiyo uu ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta ee gobolkaasi.
Qaraxa ayaa waxaa lagu soo warramayaa in gaarigiisa loogu xiray sarkaal ka tirsan waaxda canshuuraha wasaaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, kaas oo magaciisa lagu koobay Cabdi-Gube.
Wararka ayaa sheegaya in mas’uulkaasi oo la dhigay isbitaalka waqooyiga Gaalkacyo uu dhaawac culus ka soo gaaray qaraxaasi.
Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo kooban ka sameeyey halkaasi.
Ma jirto illaa iyo hadda cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxaas oo aysan weli faah faahin laamaha amniga.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa falal liddi ku ah nabad-gelyada waxa ay ka dhacayeen gudaha magaalada Gaalkayo, kuwaas oo u badan dilal qorsheysan.
Nairobi 5ta Maarso 2020 Qaar ka mid ah xubnaha is-beddel doonka Jubaland ee kasoo horjeeda Axmed Madoobe ayaa sheegay in heshiis horudhac ah lagu gaaray wada-hadalladii Nairobi uga socday madaxweynaha Jubaland iyo Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig, oo iyagana la sheegtay madaxweyne.
Wada-hadalladaan ayaa waxaa garwadeyn ka ah dowladda Kenya oo ka shaqeysay sidii la isugu keeni lahaa Axmed Madoobe iyo xubnaha ku haysta xilka madaxweynaha.
Cabdinuur Jaamac Jookar oo ka mid ah is-beddel doonka, kuna sugan Kismaayo, ayaa sheegay in dhinacyada ay isku raaceen qodobo ay ka mid yihiin in madaxweyne Axmed Madoobe loo daayo xilka madaxweynaha, islamarkaana xubnaha kale lagu qanciyo waxyaabo kale.
Jookar ayaa intaas ku daray in Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig ay qasabtay dowladda Kenya.
“Waxaan maqleynaa oo Jubaland ay aad uga xuntahay, Seeraar iyo Xidig waxaa qasabtay Nairobi, oo qodobo ayaa la soo saarteen Axmed Madoobe. Dhammaan xubnihii Is-beddel doonka ee Kismaayo arrintaas ayey ka shireen, aad ayaan uga xunnahay, mana soo dhooweyneyno. Sidii ay meesha uga soo bixi lahaayeen ha uga soo baxaan,” ayuu yiri Jookar.
Caasimada Online oo xiriir la sameeysay xafiiska Axmed Madoobe, iyo xubnaha ku dhow Seeraar iyo Xidig, waa ay diideen inay xaqiijiyaan heshiiska la sheegay in la gaaray.
Horraantii bishii Febraayo ayey aheyd markii xubnaha mucaaradka ee Jubaland diyaarad Militari oo ay leedahay Kenya looga soo qaaday magaalada Kismaayo, waxaana wada-hadallada qeyb ka ahaa wakiilo ka socda militariga iyo sirdoonka Kenya.
Qaramadda Midooway 5ta Maarso 2020Hay’adda UNFPA oo ka mid ah hay’adaha caalamiga ah ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay fal kufsi arxan darro ahaa oo todobaadkii la soo dhaafay degmada Afgooye loogu geystay laba gabdhood oo da’yar ah.
Muqdisho 5ta Maarso 2020 Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay gurigiisa ka kaxeeyey oo xiray agaasimihii Agaasimihii Waaxda Maaliyadda ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buulle, sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Wararka ayaa sheegaya in agaasimaha lagu eedeeyey uu leexsaday lacag dowladda ka heshay hay’ado caalami ah, oo loogu talo-galay in lagu fuliyo mashruucyo caafimaad, oo ay ku jiraan la-dagaalanka Coronavirus.
Muqdisho 5ta Maarso 2020 Wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa maanta sheegtay inaysan jirin cabsi laga qabo raashin yari dalka ka dhacdo, sababo la xiriira cudurka Coronavirus.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Inj. Cabdullaahi Cali Xasan, ayaa maanta xafiiskiisa kulan is-xog-waraysi ah oo ku saabsan saameynta dhaqaale ee cudurka COVID-19 uu ku keeni karo maciishadda dalka la yeeshay mas’uuliyiinta Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha oo uu hoggaaminaayey guddoomiyaha Rugtaasi Maxamuud Cabdikariin Gabeyre iyo Ganacsato kala duwan oo Soomaaliyeed.
Kulankan oo sidoo kale ay ka soo qeyb-galeen Agaasimaha guud Cabdicasiis Ibraahim Aadan iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda, ayaa ujeedkiisu ahaa siddii Wasaaraddu ay Ganacsatada uga heli lahayd xogo la xidhiidha badeecadaha dalka gaar ahaan kaydka raashinka.
Ganacsatada ayaa waxay sheegeen in illaa hadda uu dalku haysto badeecado ku filan oo aanay qabin wax wer-war ah sidoo kale na ay taagan yihiin Maraakiib dalka u sida raashin tiro badan.
Ganacsatadu, waxa kale oo ay halkaas ka sheegeen caqabadaha jira iyo weli ba tallooyin ku aadan sida ugu habboon ee loogga hor-tagi karo saameynta dhaqaale ee uu keeni karo xanuunka Coronavirus (COVID-19).
Inj. Cabdullaahi Cali Xasan oo ugu dambeyn halkaas ka hadlay, ayaa sheegay inay ka dawlad ahaan diyaar u yihiin tallaabo kasta oo loogga hortagi karo saameynta dhaqaale ee cudurkaasi ku keeni karo maceeshada dalka, waxaana uu carabka ku dhuftay inay Ganacsatada ka taageerayaan siddii loo yareyn lahaa caqabadaha jira iyo fududeynta Ganacsiga, isaga oo ku dhiiri-geliyey in shacabka loo naxariisto wakhtiyadan adag isla-mar-ahaantaana aan kor loo qaadin qiimaha maceeshada dalka.
Gedo 5ta Maarso 2020 Warar ay heshay Warbaahinta Dalka ayaa sheegay in ciidamo Itoobiyaan ah oo cusub ay soo gaareen degmada Luuq ee gobolka Gedo, ayaga oo kusoo wajahan deegaano kale oo ka mid ah Jubaland.
Ciidamadan oo dhowaan kasoo gudbay xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa saraakiil la hadlay Caasimada Online waxay sheegeen inay ku wajahan yihiin gobolka Jubbada Dhexe.
Goobjoogeyaal ayaa Warbaahinta Dalka u sheegay ciidamada Itoobiyaanka ay xiran yihiin dharka iyo Koofida Cagaaran ee ciidamada Howlgalka Midowga Afrika ee Amisom, ayna ku socdaan gaadiid ay ku buufsan tahay sumaddda Amisom.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee wehliya kuwa Itoobiya ayaa sheegay in u jeedka ciidankaas uu yahay gacan ku dhigista Gobolka Jubada Dhexe, oo ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab.
Si kastaba, saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland ayaa ku tilmaamay ciidankan kuwa dalka si sharci-daroo ah ku jooga, oo ku gabanaya magaca Amisom, ayaga oo taageeraya qorshaha dowladda federaalka ah ay ku qabsaneyso deegaanada Jubaland.
Saraakiisha Jubaland ayaa sidoo kale ku dooday in ciidamada Amisom ee xilligaan ku sugan deeganada Jubaland ee ka socda Kenya iyo ciidamada daraawiishta Jubaland ay ku filan yihiin aminga deegaanada Jubaland islamarkaana aysan jirin sabab ay dowladada Itoobiya ay ciidamo ugu soo dirto Soomaaliya, sida ay hadalka u dhigeen.
Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa waxaa muddo u dhaxeeya xiisad hogaamisay dagaal ka dhacay degmada Beled-Xaawo, waxaana kala taageeraya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya.
Muqdisho 4ta Maarso 2020 Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in kiisaska dadka laga helay cudurka Coronavirus ee Soomaaliya ay kordheen oo ay gaareen 7 qof, halka markii hore ay ka ahaayeen 5.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in laba kiis oo cusub oo ah dad qaba xanuunka Coronavirus laga xaqiijiyey magaalada Muqdisho, taasi oo tirada magaalada ka dhigeysa 5 qof.
Waxaa sidoo kale hore loo xaqiijiyey laba kiis oo deegaanada Somaliland ah, taasi oo tirada guud ee Soomaaliya ka dhigeysa 7 kiis.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in labada qof ee kiiska laga helay ee Muqdisho ay kala yihiin qof muwaadin Soomaaliyeed ah iyo ajnabi ku sugan caasimada.
Wasaaradda ayaa intaas ku dartay in mid ka mid ah dadkii horey cudurka looga helay uu kasoo bogsooday, mana jiro illaa hadda qof cudurka ugu geeriyooday gudaha Soomaaliya, inta la ogyahay.
Dhinaca kale, guddiga sare ee loo xil saaray xakamaynta Coronavirus ee Soomaaliya, oo shir jaraa’id ku qabtay Isbitaalka Martiini, ayaa Soomaalida ugu baaqay inaan la qarsan, haddii la isaga shakiyo cudurka.
Dr. Cabdirizaaq Yuusuf Axmed (Jalaalu-diin) oo xubin ka ah guddiga sare ayaa sheegay inuu ka baqdin qabo in uu dalka ku laba qarxo cudurkan, haddii ay dadka qaarkii qarsanayaan.
“Wuu jiraa xanuunka ha inkirin, dadka ka ilaali. Naftaada ka ilaali waa xanuun saf mar ah oo kugu dhici kara, qof walbana ku dhici kara, waa farriinta aan jecelnahay inaan dadka la wadaagno,” ayuu yiri Dr. Cabdirizaaq.
Dowladda Soomaaliya ayaa xarun lagu karantiio dadka qaba cudurka Coronavirus ka hirgelisay Isbitaalka Martiini ee Muqdisho, waxaana ay howl-wadeennada goobtan ku boorinayaan buldhada in ay u dhega nuglaadaan talooyinka iyo wacyi-gelinta hay’adaha caafimaadka ee dalka.
Muqdisho 4ta Maarso 2020 Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga digtay in doorashooyinka Soomaaliya ay ka dib dhacaan waqtigii loogu talo-galay, oo aan la aqbali karin in dib loo dhigo.
Qoraal ay soo saartay Madasha ayey ku sheegtay inay garowsatay “in xukuumadda hadda jirta ay ka caga-jiideyso taaba gelinta hannaanka xisbiyada badan, ayna faro-gelin ku hayso guddiga labada gole ee diyaarinta xeerarka dhameystiraya sharciga doorashooyinka qaranka.”
“Doorashooyinka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo asteeyay, waana inaysan dhicin wax mudo kordhin ah. Doorashooyinku waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhaca si daahfurnaan leh,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Qoraalka Madasha ayaa sidoo kale ugu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah hannaanka Federaalka inay u qoondeeyaan dhaqaalo doorashooyinka soo socda, taasoo hadda aanan ka muuqan, baa la yiri qoondeynta dhaqaale ee 2020.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sidoo kale dalbatay in Saamileyda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed iyo ururada Bulshada ay si wadajir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deegaaneed oo lagu hirgelin karo doorasho sax ah.
Muqdisho 4ta Maarso 2020 Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay xiisada colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaano hoos yimaada magaalada Kismaayo ee gobolka J/Hoose.
Kulan oo uu gogoshiisu dhigay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar), islamarkaana ay ka qeyb galeen odayaal dhaqameedyo iyo waxgarad ka soo jeeda Jubbaland ayaa waxaa looga arrinsaday, sidii loo qaboojin dagaal beeleedyada weli ka socda duleedka magaaladaasi.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaliya, islamarkaana kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dadka deegaanadaasi aysan xamili karin dagaal, loona baahan yahay in wax weliba lagu dhameeyo wadahadal.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku darayin wixii dhib ah ee dhacday dib la’isaga imaan doono, lagana xaali doono.
Dhankiisa wasiir Oomaar oo madasha ka hadlay ayaa ka dalbaday beelaha diriraya inay dagaalka ku joojiyaan shuruud la’aan ah, si looga baaqsado inuu dhiig kale daato.
Ugu dambeyn wuxuu fariin u diray dad uu sheegay inay buun-buuninya colaadaasi, isagoo ugu baaqay in aysan marin habaabinin dadka Soomaaliyeed.
Maamulka Dowladda Puntland 5ta Maarso 2020 Afhayeenka ciidanka booliska Puntland Cabdi Waaxid Cabdulle Muuse ayaa beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada, oo lagu sheegay in askari ka tirsan ciidamada Puntland uu ahaa is-miidaamiyihii isku qarxiyey guddoomiyihii gobolka Nugaal ee ku dhintey qarixii ka dhacay Garoowe.
Cabdi Waaxid ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid sal iyo raad midna aanan laheyn, isla markaana dadka baahiyey ay yihiin kuwo doonaya inay ku ciyaaraan sharafta Puntland.
Afhayeenka, oo uu garab taagnaa askarigii lagu been abuurtay ee la sheegay inuu is qarxiyey, ayaa intaas ku daray in ciidamada booliska Puntland ay yihiin kuwo u taagan difaaca Puntland, sidoo kalena shacbaka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan.
Illaa iyo hadda ma cadda qofka sida rasmiga ah u fuliyey qaraxa, hase yeeshee kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa.
Madaxweynaha maamulka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) ayaa maalin kadib qaraxa sheegay in Puntland ay ka war heysay xogta qarxaasi, balse uu dhacay, xilli ay ku raad-joogeen laamaha amniga ee maamulkaasi.
Deni ayaa wuxuu mas’uuliyadda qaraxaan ku eedeeyey inay ka dambeeyeen dad uu sheegay inay ka soo horjeedaan horumarka Puntland, sida uu hadalka u dhigay.
Muqdisho 5ta Maarso 2020 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa baaq nabadeed kasoo saaray colaada kasoo cusboonaatay degmada Wanllaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, taas oo u dhaxeysa laba maleeshiyo beeleed.
WARARKA MAANTA 4ta Abriil 2020 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Yaa runta ka qarin kara shacabka #Soomaaliyeed? Maxay tahay sababta uu Maal-Geliye Argagixiye Fahad Yaasin Daahir “Daba-Naasle” Taliyaha Hay’adda Nabad-Sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka u amray in loo hanjabo Weriye Haruun Macruuf oo hanjabaadaas loogu qoray khatka bogga #Twitter ee #NISA? Maxuuse Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo “Been-Hawaas” u rabaa in la khaarajiyo Madaxweynihii hore Mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo uu ka cabsi qabo inauu kurgiga Madaxweynenimadda ku guullaysto mar kale 2021? Maxuu Ciidanka #Ethiopia u soo geliyey #Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”? Ma qaadato lacag luulaash iyo musuqmaasuq ah Boqortooyadda Saxaafadda Soomaaliya/Boqortooyadda Warbaahinta Soomaaliya Madaxweyne Mudane Farmaajo marka iska-casil xukunka iyo siyaasadda dalka waad ku fashilantay oo #Ethuiopia waxba kuuma qaban karto? Yaa Garoowe qarxiyey? Yaa la dooran doonaa Madaxweynaha Soomaaliya 2021 Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed rumayso ma ha rumaysan? Maxay beesha caalamka xiriir toos ah hadda ula samaysatay Madaxweynihii hore Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed? Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda 2021? Maxay tahay sababta #Madaxweyne Farmaajo u keenay #Ethiopia Soomaaliya? Maxayse tahay sababta aysan labada aqal iyo guddoomiyayaashooda uga hadli sababta si sharci-darrada ah ee ay Ciidanka #Ethiopia ku soo galeen Soomaaliya? Yaa la khaldi karaa? Ha Wiqleyso!
Gedo 4ta Maarso 2020 Warar ay heshay Warbaahinta Dalka ayaa sheegay in ciidamo Itoobiyaan ah oo cusub ay soo gaareen degmada Luuq ee gobolka Gedo, ayaga oo kusoo wajahan deegaano kale oo ka mid ah Jubaland.
Maamulka Dowladda Puntland 4ta Maarso 2020 Afhayeenka ciidanka booliska Puntland Cabdi Waaxid Cabdulle Muuse ayaa beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada, oo lagu sheegay in askari ka tirsan ciidamada Puntland uu ahaa is-miidaamiyihii isku qarxiyey guddoomiyihii gobolka Nugaal ee ku dhintey qarixii ka dhacay Garoowe.
WARARKA MAANTA 2da Abriil 2020 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Maxay sababra uu Maal-Geliye Argagixiye Fahad Yaasin Daahir “Daba-Naasle” Taliyaha Hay’adda Nabad-Sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka u amray in la weeraro guriga Madaxweynihii hore Mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed? Maxuuse Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo “Been-Hawaas” u rabaa in la khaarajiyo Madaxweynihii hore Mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo uu ka cabsi qabo inauu kurgiga Madaxweynenimadda ku guullaysto mar kale 2021? Maxuu Ciidanka #Ethiopia u soo geliyey #Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”? Ma qaadato lacag luulaash iyo musuqmaasuq ah Boqortooyadda Saxaafadda Soomaaliya/Boqortooyadda Warbaahinta Soomaaliya Madaxweyne Mudane Farmaajo marka iska-casil xukunka iyo siyaasadda dalka waad ku fashilantay oo #Ethuiopia waxba kuuma qaban karto? Yaa Garoowe qarxiyey? Yaa la dooran doonaa Madaxweynaha Soomaaliya 2021 Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed rumayso ma ha rumaysan? Maxay beesha caalamka xiriir toos ah hadda ula samaysatay Madaxweynihii hore Mudane Madaxweyne Shiikh Shariif Shiikh Axmed? Yaa noqon doona Raysal Wasaaraha soo socda 2021? Maxay tahay sababta #Madaxweyne Farmaajo u keenay #Ethiopia Soomaaliya? Maxayse tahay sababta aysan labada aqal iyo guddoomiyayaashooda uga hadli sababta si sharci-darrada ah ee ay Ciidanka #Ethiopia ku soo galeen Soomaaliya? Yaa la khaldi karaa? Ha Wiqleyso!
Diinsoor 2da Maarso 2020 Wararka ka imaanaya dagmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa amaanka Koofur Galbeed ay u goosteen Al-Shabaab kadib markii ay laayeen dad shacab ah.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in dadka shacabka ah ee la laayahay ay ku sugnaayeen goob maqaaxi ah oo ku taala Diinsoor.
“Dadka la laayay waxey tiradooda gaareysaa 14-qofood, waxaana ku jira laba ka tirsan ciidamada Federaalka, sidoo kalana dhaawac saddex ah ayaa jira” ayuu yiri qof goob jooge oo ah ehelkiisa ay qeyb ka noqdeen dadka geeriyooday.
Sida la fahamsan yahay ciidamada falkaan geystay waxey ilaalo u yahiin mid ka mid ah masuuliyiinta dagmada Diinsoor, waxaana jira khilaaf siyaasadeed oo maalmahaan jiray.
Waxey dadka deegaanka ogyahiin in khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka dagmada, balse midkoodna kama hadlin arinta dhacday iyo sababta ay ku timid.
Wariye madax banaan oo ku sugan Diinsoor ayaa sheegay in ciidamada ay wali isku hor fadhiyaan magaalada, xaaladdana ay tahay mid kacsan, wuxuuna sidoo kale qiray in Gudoomiyaha dagmada uu hoosta ka galay ciidamada Itoobiya.
Wali waxaa Diinsoor laga dareemayaa hub aruursi, waxaana la dareensan yahay dhinacyada isku haya siyaasadda ay wali xal u arkaan in gacmaha la iskula tago.
Madaxda Maamulka Koofur Galbeed ayaan ilaa iyo hadda wax war ah kasoo saarin dhibaatada loo geystay dadka shacabka ah iyo dirirta la sheegay iney u dhaxeyso labadaas masuul.
Maamulka Dowladda Somaliland 2da Maarso 2020 Xukuumada Somaliland ayaa maanta sheegtay inaysan joojineyn duulimaadyada ay diyaarada Ethiopian Airlines ku timaado madaarka magaalada Hargeysa, xili ay wajaheyso labo Kiis oo la xiriira Coronavirus.
Somailand ayaa weli ku adkeysaneysa inaysan joojin duulimaadyada diyaaradaasi oo tagta waddamo uu cudurkaasi faro ba’an ku hayo, iyadoona la aaminsan-yahay in gudaha Somaliland ay iyadu horseeday in laga helo Kiisas la xiriira fayruska Corona.
Wasiirka warfaafinta Somaliland, Saleebaan Koore ayaa sheegay inaysan waqti xaadirka Xukuumadoodu joojineyn diyaarada Ethiopian Airlines, isagoona xusay inay soo saareen go’aamo ay dhawaan ku mamnuuceen dadka ka imanaya Yurub iyo Mareykanka.
Wasiir Koore ayaa diyaarada Ethiopian Airlines ku sheegay mid ka qeyb qaadaneysa soo daabulida dadka ku xayiran garoomada, isla markaana ay qasab tahay in dadkii hore u goostay Ticket-yadooda safarku ay ka soo dagaan madaarka Hargeysa.
Somaliland ayaa wajaheysa halis caafimaad oo baahsan, maadama aysan ilaa hadda si dhab ah u qaadin talaabooyin ay ku xakameyneyso in cudurka Corona uu ku faafo deegaanadeeda, iyada oo Kiisas la xiriira cudurkaasi laga helay magaalooyinka Berbera iyo Burco.
Mana cada ilaa hadda sababta ay dowladda federaalku ay talaabo uga qaadi laadahay diyaarada Ethiopian Airlines oo duulimaadyadeedii caadiga ahaa ku tagta Somaliland, oo iyadu ku dooda inay tahay dal madax-banaan, balse aan weli aqoonsi buuxa ka helin beesha caalamka.
Muqdosho 2da Maarso 2020 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xoojinaya dadaallada ku aaddan ka hortagga cudurka Koroona ayaa Cafis Madaxweyne u fidiyey 148 maxbuus oo u xukunnaa dambiyo fudud.
Maamulka Dowladda Jubbaland 2da Maarso 2020 Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa lagu wareejiyay todoba qof oo lagu karantiilay magaalada Garowe sida ay ku dhawaaqeen guddiga ka hortagga faafitaanka caabuqa Coronavirus.
Sida ay guddiga sheegeen, shaqsiyaadkaan ayaa kasoo gudbay xadka maamulka Somaliland, sidoo kale saddex qofood ayaa la sheegay in lagu sii heyn doono magaalada Garowe si ay u dhameystaan mudada xilli huuriska.
Guddiga waxey sheegeen in maamulka uu hogaamiyo Ahmed Abdi Kariye (Qoor-Qoor) ay ku wareejiyeen maalintii ugu horreysay bishaan toddoba qofood.
Wararka laga helayo Garowe waxey sidoo kale cadeynayaan in deegaanada Puntland uusan ka jirin wax kiis ah oo la xiriira Coronavirus, si la mid ah wali ma jirto wax kiis cusub ah oo la diiwaangaliyay.
Shacabka Puntland waxaa lagu dhiirigaliyay iney u hogaan-samaan awaamiirta xukuumadda ee lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunkaan adduunyada dhibaatada ku haya.
Maamulka Dowladda Jubbaland 2da Maarso 2020 Dagaal beeleed u dhaxeeya laba maleeshiyo oo maalmihii dhowaa ka socday duleedka magaalada Kismaayo, ayaa lagu soo warramayaa inuu sii xoogeystay islamarkaana ay dad badan ku dhinteen, saakayna uu halkaasi ka socdo
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen Caasimadda Online, dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa Galbeedka Kismaayo, waxaana la isku adeegsanayaa hubka fudud iyo kuwa culus.
In ka badan 50 qof ayaa lagu waramay in ay ku geeriyootay colaad muddo isbuuc ah ka oogan duleedka galbeed ee caasimada ku meelgaarka maamulka Jubaland ee Kismaayo.
Dadkaan dhintay ayaa waxaa la sheegay isugu jiraan dad shacab ah iyo dhinacyadda dagaalamay oo maleeyshiyo beeleed.
Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in colaada oo wali taagan ay salka ku hayso dhul daaqsimeed iyo aanooyin la xiriira qabiil.
Tobanaan kale oo dhaawacyo ay kasoo gaareen isku dhacyadda ayaa la tilmaamay in la dhigay Isbitaalka guud ee Kismaayo.
Colaada ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay saaka mar kale qaraxdey, isla markaana dhinacyadda ay wadaan hub-uruursi xoogan.
Maamulka Jubaland ayaa sheegay inay dhawaan ciidamo u dirayaan deegaanada dagaalka uu ka socdo, balse weli kuma guuleysan inay joojiyaan dagaalka.
Sacuudi Carabiya Wasiirka Xajka iyo Cumrada ee dalka Sacuudi Carabiya oo wareysi siiyey telefishinka dowladda ayaa dhammaan dadka Muslimiinta ah ka codsaday inay hakiyaan qorshahooda Xajka ee sanadkaan illaa inta laga xaqiijinayo saameynta cudurka Coronavirus ee adduunyada ku faafayo.
Muqdisho 1da Maarso 2020 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa soo dhoweeyay go’aanka ay Deeq bixiyeyaasha Naadiga Paris dalka uga cafiyeen $1.4 Bilyan oo kamid ahayd deyntii lagu lahaa dalkdeenna.
Qoraal kasoo baxay xafiiska Kheyre ayaa sidoo kale lagu sheegay deynta sida rasmiga ah illaa hadda looga cafiyey Soomaaliya iyo tan ku hartay.
Waxaa qoraalka lagu sheegay in todobaadkii la soo dhaafay hay’adaha dhaqaalaha caalamiga ah (IFI’s) ay dalka ka cafiyeen $830m, taasoo isugeynta lacagta Soomaaliya laga cafiyay illaa iyo hadda ka dhigeysa 2.23 bilyan oo dollar. Deynta horay loogu lahaa Soomaaliya waxay ahayd $5.2 Bilyan.
Sidoo kale deeq bixiyayaasha aan xubnaha ka ahayn Naadiga ku bahoobay Paris ayaa iyana ballan qaaday in ay Soomaaliya ka cafin doonaan daytna ay Soomaaliya ku leeyihiin, taasi oo macnaheedu yahay in Soomaaliya laga cafiyey 67% ka mid ah deyntii lagu lahaa.
Waxaa kale oo ay deeq bixiyayaashu ballan qaadeen in ay daymaha oo dhan ama intooda badan ay ka cafin doonaan Soomaaliya marka ay Soomaaliya kasoo baxdo shuruudaha u harsan, taasi oo qaadan doontaa muddo saddex sano ah.
Qoraalkan ayaa u muuqda mid ay dowladda ugu dambeyn ku qiratay xaqiiqda deyn-cafinta Soomaaliya, oo muddo sheegeysay in laga wada cafiyey.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa bogaadiyay dadaalka ay hay’adaha dowladda Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed ku bixiyeen ka mira dhalinta arrintan.
Muqdisjo 2da Maarso 2020 Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa teegro buuxda u muujisay duqeynta ay ciidamada Mareykanka ka fuliyaan Soomaaliya, kadib markii hay’adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ay sheegtay in duqeymo dhacay bishii Febraayo lagu dilay shacab.
Duqeyn labadii Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ayaa lala beegsaday qoys cunteynayey, sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaas lagu dilay Nuurto Kuusow Cumar Abuukar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo walaalaheed ka yar ah, oo da’deedu tahay 7 iyo 12 jir, iyo ayeydood oo 70 jir ah..
Si kastaba qoraal kasoo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Dowladda Mareykanka iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay “si aad ah dadaal ugu bixiyaan yareynta waxyeelada suuragalka ah ee ka iman karta duqeymaha la wado.”
Hoos ka aqriso qoraalka wasaaradda warfaafinta oo dhameystiran.
Muqdisho, 01 Abriil, 2020. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Mareykanka ayaa ka wadashaqeynaayey si ay cadaadiska argagaxisada Alshabaab uga qaadaan dalka Soomaaliya.
Wadashaqeyntaa ayaa waxaa ka mid ah taageerada hawlgallada dhulka iyo kuwa cirka ah ee ay wadaan Ciidanka Mareykanka ee AFRICOM . Sahanka wax lagu ogaado iyo sawaariikhda ee ay diyaaradahan gutaan ayaa aad muhiim ugu ah hoos u dhigidda awoodda Alshabaab oo ay ku beegsan karaan ciidanka meletariga iyo shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Mareykanka iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si aad ah dadaal ugu bixinaya yareynta waxyeelada suuragalka ah ee ka iman karta duqeymaha la wado.
Iyada oo ay ugu wacantahay qaddarinta iyo ahmiyadda ay Dowladaha Mareykanka iyo Dowladda Soomaaliya siinayaan Sharciga hubka ee waqrtiga dagaalka ayay Alshabaab ku xiisaabtamaan in Dowladda Mareykanka iyo Dowladda Soomaaliya aad u dhawrayaan nolosha bani’aadamka taasoo keentay in ay ku dhex-dhuuntaan meelaha shacabka ku badanyahay iyaga oo dadka shacabka u isticmaalaya gaashaan ay uga badbaadaan weerarrada.
Tusaale kale ayaa ah sababta ay hawlgalka taageerada cirka u tahay lagama maarmaan markii la xoreynayey Magaalada Jannaale ayaa taageerada Ciidanka Mareykana loo isticmaaley in hawada ka taageeraan ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM intii uu socday hawlgalka. Taageeradan ayaa si aad ah u dhintay awoodda Alshabaab ay ku dagaalami kareen islamarkaana hoos u dhigtay waxyeellada soo gaari kartay ciidamada saaxiibada intii uu socday duulaanka.
Waajibka koowaad ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ka saran shacabkeeda ayaa ah in ay dhawrto nolosha, hantida iyo xorriyadda dadkeeda. Si taa loo meelmariyo ayay Dowladda Soomaaliya ku qasbantahay in ay sii waddo la dagaalanka kooxda argagaxisada ee xiriirka la leh Alqaacida ilaa laga dabarjaro. Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ba waa in ay gacmaha isqabsadaan si loo wajaho kooxdan Kansarka ah.
https://www.youtube.com/watch?v=PsHrRXhHt4cWARARKA MAANTA 29ka Maarso 2020 Sir Culus!Su’aallaha Maanta: Maxuu u noqday Maamulka Dowladda #Somaliland midka ugu liita Maamul Gobaleedyada ka dhex jira dalka la oran jiray #Soomaaliya? Maxay tahay 3 nin oo hal qabiilka ka soo jeedo oo hab qabiilnimo aqoonsi dowladdeed ku raadinaya? Yaa kamid noqon doona siyaasiyiinta ay khaarajin doontoa Xukuummadda Fashilantay ee Nabad Iyo Nolol “Nabar Iyo Naxdin”? Maxayse tahay sunta halista ah ee ay keentay dowladda siisa lacag farbada Dowladda Soomaaliya? Maxuuse uga dhuumanayaa saxaafadda dalka Argagixiye Maal-Geliye Fahad Yaasiin Daahir “Daba-Naasle” oo ogaaday inuusan runta iyo musuqmaasuqiisa ka qarin karin Ummadda Soomaaliyeed? Maxuu La-Taliyaha Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Maxamed Yuusuf oo wada iska-horkeen iyo qas siyaasaddeed oo lagu weerarayo beesha Maheerteen gaar ahaan Maxamuud Saleebaan? Yaa runta ka qara Ummadda Soomaaliiyeed? Ha Wiqleyso! Muqdisho 29ka Maarso 2020 Dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay waxaa Muqdisho aad looga hadal haayaa walaac xoog leh oo ay qabaan siyaasiin xilal kala duwan dalkaan ka soo qabtay oo haatan mucaarad ah, walaacaas oo ku aadan Bandow la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku soo rogi doonto Muqdisho.Bandowga ayaa suurta-gal ah in saacado kooban la geliyo magaalada, si loo yareeyo dhaq-dhaqaaaqa dadka, taasi oo qeyb ka ah xakameynta faafitaanka cudurka Coronavirus.Siyaasiinta mucaaradka oo ay ku jiraan Xildhibaano, wasiiro hore iyo xubno kale ayaa sheegay in ay heleen xog sheegaysa in dowladda Soomaaliya ay ka damacsan tahay bandowga qorshe kale oo ah in la joojiyo kulamo xasaasi oo Madasha Xisbiyada iyo siyaasiin kalaba ka yeelanayaan doorashooyinka Soomaaliya.“Qorshaha aan ka war helnay waa in la tago guryaha iyo xafiisyada Xisbiyada mucaaradka iyo dadka kale saameynta leh iyadoo lagu mar marsiinayo bandow siyaasadeed Muqdisho lagu soo rago rabo laguna tilmaamayo ka hortaga Coronavirus,” ayuu yiri Sarkaal sare oo ka tirsan Xisbiyada mucaaradka ee ka jira Muqdisho.Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya islamarkaana ku aadan hadal heyntaan ka jirta magalada balse waxaa la dareemayaa in la badalay inta badan ciidankii ku qornaa Kontaroolada Muqdisho.Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa marar badan ku eedeeyey dowladda inay si gaar ah u beegsaneyso, waxaana ugu dambeeyey qoraalka madasha xisbiyada qaranka ay dhowaan ku sheegeen in ciidamo ay weerar kusoo qaadeen hoyga madaxweyne Shariif, taasoo oo ay beenisaywasaaradda amniga Soomaaliya.Maamulka Dowladda Jubbaland 29ka Maarso 2020 Madaxweyne ku xigeenka 1-aad ee maamulka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo u warramay warbaahinta ayaa si adag uga hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka iyo dhaq dhaqaaqyada gobolka Gedo.Ugu horreyn wuxuu ku eedeeyey dowladda dhexe inay aysan dooneyn in xal dhab ah laga gaaro khilaafka labada dhinac oo marba marka ka dambeysa ka sii daraya.Sayid Aadan ayaa sidoo kale tilmaamay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac ay ka dhex faa’iideysatay kooxda Al-Shabaab, wuxuuna carabka ku dhuftay inay isku ballaarisay qeybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo ee koofurta dalka Soomaaliya.Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in gobolka ay ka qortaan dhalinyaro cusub, kuna tababaraan deegaanka Ceel-Cadde, sida uu hadalka u dhigay. “Gobolka Gedo, Degmada iskaba dhaaf xitaa tuulooyinka kuma aysan sugneen Al-Shabaab, balse maanta waxa ay joogaan Degmooyin ay Ceel Cade kamid tahay oo ay ku tababartaan dhalinyarada ku biireysa, taasi waa natiijada ka dhalatay faragelinta Dowladda.” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland.Maxamuud Sayid Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dhibaatooyin kala duwan ay soo mareen qabashada degmooyinka gobolka Gedo, si ay uga saaraan Al-Shabaab, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dagaalladaasi ay ku waayeen askar fara badan.Dhinaca kale wuxuu qiray in dowladdu guud ahaan ay qabsatay gobolka Gedo, islamarkaana aysan Jubbaland gacanta ku heyn hal degmo, siduu hadalka u dhigay.Ugu dambeyn wuxuu u soo jeediyey dowladda federaalka inay joojiso dhaq dhaqaaqyada milatari ee ay weli ka wado gobolka, si loo soo afjaro khilaafka haatan u dhexeeya labada dhinac, isagoona carabka ku adkeeyey inay diyaar u yihiin wadahadal miro dhal ah.Muqdisho 29ka Maarso 2020 Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ruqseeyay arday ku dhaw 60 qof oo isugu jira Gabdho iyo Wiilal, islamarkaana qortay kamid noqoshada ciidamada booliska Soomaaliya.Dhalinyaradaan ayaa is diiwaan geliyay kadib markii dhawaan ay taliska boolika ogeysiiyeen bulshada Soomaaliyeed in ciidan loo qaadanayo ardayda dhameysatay dugsiyada sare.Cabdiraxmaan Diiriye oo kamid ah dhalinyaradaas oo la hadlay Caasimada Online ayaa sheegay in ardayda laga soocday qaar magacyadooda warqad lagu watay inta kalane la eryay iyagoo tababar ku jiray mudo ku dhaw.“Cabsi weyn ayaa qabnaa sababtoo ah waxaa ka nimid meelo kala duwan oo aan amaan aheyn waxaana laga yaabaa in xogtayna gaarto cadowga wixii aan usoo baxnayna aan weynay.”Valueimpression PlaceholderCabdiraxmaan oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Tartan ayaa lagu soo baxay markii ugu horeysay intii soo baxday ayaa tababar loo furay maalmo kadib qeyb kale ayaa la soocday anagana waa nala eryay, waxaana dadkaas nagula sheegay saraakiil ka tirsan Haramcad oo dhalinyarada kala sooceysay.”“Aniga waxaa askarimimo u qortay inaa dalkayga iyo dadkayga u shaqeeyo inaa helo shaqo maadaama ay ku daalay shaqo kale helisteeda balse hada aad ayaa u niyad jabnay waan ka codsaneynaa madaxda Qaranka in aysan i rajo dhigin,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.Saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in ardaydaan oo ku xareysneed Iskuul Bulusiya masuq maasuq lagu kala reebay taasina ay ka dambeeyaan saraakiil sar sare.Wali ma jirta cid xaqiijin karta in madaxda Qaranka ay kawar qabaan arrintan.Muqdisho 29ka Maarso 2020 Xiisad ayaa caawa ka taagan magaalada Dhuusamareeb, kadib markii ehellada wiil galabta lagu dilay ay diideen in la aaso meydkiisa.Wiilka la dilay ayaa caan ka ahaa magaalada waxaana lagu magacaabi jiray Shaafici Xaaji Diiriye, waxaana dilay askari ka tirsan ilaalada Senator Yuusuf Geelle Dhagey oo ka tirsan golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.Wiilka la dilay ee Shaafici oo watay gaari yar oo nuuca raaxada ah, ayuu askarigan ka tirsanaa ilaalada Senatorka rasaas ku furay, waxuuna ku geeriyooday isla goobta.Senator Yuusuf Geelle Dhagey oo ka hadlay dilka wiilkaas uu u geystay askariga ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa u tacsi u diray qoyska iyo ehellada marxuumka , isagoo sheegay in hey’adaha ammaanka uu ku wareejiyey ruuxii ka dambeeyey dilkaas, isla markaana cadaaladda la mari doono.Valueimpression Placeholder“Alle ha u naxariisto shaafici Xaaji Diiriye oo ku geeriyooday maanta Dhuusamareeb, waxaan kaga tacsiyeeynayaa geerida Marxuumka, qoyskiisa, eheladiisa iyo dhammaan Ummadda Soomaaliyeed,Ugu dambeyn waxaan halkaan ka cadeeynayaa in aan hay’adaha amniga ku wareejiyay falkaa foosha xun cidii u geysatay marxuumka cadaalada loo marsiin doona” ayuu yiri Senator Dhagey.Allaha u naxariistee Shaafici Xaaji Diiriye ayaa ka tirsanaa jiray ciidankii Ahlu-Sunna Walajamaaca ee gobollada dhexe kula dagaalay Al-Shabaab, haatana waxaa la sheegay in uu ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qeybta 21aad ee fadhigeedu yahay magaalada Dhuusamareeb.Dhuusamareeb tan iyo markii ay ammaankeeda la wareegeen ciidamada dowladda federaalka waxaa ku batay jidadka u xiran mas’uuliyiinta oo aan horay looga aqoon magaalada, sidoo kale waxaa jiray dilal dowr ah oo ay ciidamada dowladdu ka geysteen, wixii ka dambeeyey markii amniga magaalada laga wareejiyey ururkii Ahlu-Sunna Waljamaaca ee la midoobey Galmudug oo maamulayey in ka badan 10 sano.Muqdisho 29ka Maarso 2020 Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaan faah faahin badan ka bixin, halka uu ku dambeeyo baaritaanka Duqii hore ee Magaalada Muqdisho.Gudoomiyihii hore ee Maamulka Gobolka Banaadir ahaana Duqii Magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) ayaa ku geeriyooday qarax 24-kii bishii July ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose ee Xamar. Qaraxa oo mid ismiidaamin lagu sheegay ayaa lagu eedeeyay in ay gaysatay gabar araga la’eed. Qaraxaasi ayaa sidoo kale lagu dilay xubno ka tirsanaa Maamulka Gobolka Banaadir.Duqa Muqdisho oo la hadlay Barnaamijka Martida Mikrafoonka ee VOA ayaa ka gaabsaday in si daahfuran uu uga hadlo waxa ka soo baxay baaritaankii la sameeyay.Duqa Muqdisho waxa uu qiray in dhibaato dhacday, isla-markaana uu maamulkiisu xoogga saaray, sidii aanu markale u dhicin lahayn fal, kaasi oo kale ah.Valueimpression Placeholder“In dhibaato dhacday waan ogahay, waana qirayaa. Dhibaatadaasoo sababtay inuu ku dhinto Duqii Muqdisho ee aniga iga horeeyay, ayna ku dhinteen hawlwadeeno aad iyo aad muhiim ugu ahaa Maamulka Gobolka Banaadir.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho.Sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in laamaha amniga ay si gaar ahi gacanta ugu hayaan arrimahaasi, balse aanu maamulkiisu waxba kala socon natiijada ka soo baxday baaritaankaasi.“Runtii arrintaas hay’adaha amniga ayaa si gaar ah gacanta ugu haya. Anigu inta aan ka warqabo in dhib dhacay ayaan ogahay, waxaana xoogga saaray kiiyoo kale sidii uusan u dhici lahayn, taasaa xoogga saaray illaa hadana meelo fiicanee noo marayan, laakiin sidaasee ahayd iyo sidaasaa wax u dhacayn, cid baa iska leh ee anagu malihin.” Ayuu yiri Cumar Filish.Masuuliyadda weerarkii lagu dilay Eng. Yariisow oo ay sheegatay Al Shabaab ayaa dood xoogan ka dhex dhalisay bulshada Soomaaliyeed, iyadoona ay dadku wax iska weydiinayeen sida ay Shabaabka ugu suurta-gashay inay beegsadeen Aqalkii Labaad ee dalka ugu muhiimsanaa, marka laga soo taggo Aqalka Villa Somalia.Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa loogu adeeggaa saddexda milyan ee ku dhaqan Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo xilliyada qaarkoodna adeegyo loogu fidiyo dadka kale ee ka yimaada Gobolada Dalka, waana taa midda keentay in dadka qaarkii ay rumeystaan in Shabaabka laga gacan siiyay weerarkaasi.Khubarada ayaa ku doodaya inaanay Shabaabka gaysan kari lahayn weerarkaasi, haddii aysan jirin gacan gudaha ah, marka aad eegto sida uu u adag yahay ammaanka xaruntaasi, oo baaritaan adag qofka lagu marsiiyo marka uu booqanayo. Libyan 29ka Maarso 2020 Safiirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u jooga wadanka Liibiya, Mudane Muxudiin Maxamed Kaalmoy oo wareysi siiyey VOA ayaa ka hadlay xaaladda Soomaalida faraha badan ee haatan ku xayiran gudaha dalka Liibiya.Kaalmoy ayaa sheegay in ay ka war hayaan xaaladda Soomaalidaasi oo dhalinyaro u badan, balse wuxuu tilmaamay in aysan heyn dhaqaale ay wax ugu qabtaan.Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in sababta ugu weyn ay tahay xayiraada caalamiga ah ee haatan saaran dalalka kala duwan ee caalamka, taas oo la xiriirta Coronavirus.Dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada ku dhibaateysan Liibiya, gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Tripoli oo isna la hadlay VOA ayaa ka warbixiyey xaaladdooda, wuxuuna sheegay in muddo shan bilood ah ay duruufu adag ku heystaan dalkaasi.Valueimpression PlaceholderWiilkaan dhalinyarada ah oo sii hadlayey ayaa carabka ku dhuftay inay dalbadeen in dib loogu celiyo dalkooda, balse ay waayeen cid u jawaabta, sida uu hadalka u dhigay.“Lacag badan ayaan ku bixinay sidii aan u gaari lahayn Liibiya oo aan kaga sii gudbi rabnay Yurub, balse waxa aan la kulanay dhibaato nafsadeed oo nagu sababtay in aynu doorano dib ugu laabashada dalkeena oo aan kolkii hore kasoo tagnay, waxa aan dalbaneynaa in naloo fududeeyo dib ugu laabashada Somalia.” ayuu wareysiga ku yiri.Liibiya ayaa marin u noqotay tahriibayaasha ka cararaya qaaradda Afrika, kuwaas oo doonayay inay gaaraan dalalka Yurub, si ay helaan nolol dhaanta tan Afrika, hayeeshee muhaajiriintaasi oo Soomaali ay ku jirto ayaa dhibaatooyin kala kulma safarkaasi dheer.Shabelle Hoose 29ka Maarso 2020 Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in xalay ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen duleedka Bariire ay ku dileen rag hubeysan oo qorsheynayey inay weerar ka geystaan deegaankaasi.Ragga la dilay oo gaarayey illaa afar ruux ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga Soomaaliya waxa ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.Sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay in raggaasi ay damacsanaayeen inay weeraraan saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose.Ugu dambeyn saraakiishaasi ayaa carabka ku dhuftay inay ka hortageen weerarkaasi, islamarkaana ay khaarijiyeen afarta nin, kana furteen hubkii ay wateen.Valueimpression PlaceholderIllaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo ku aadan toogashada loo geystay afartaasi xubnood.Inta badan dagaalyahannada Al-Shabaab ayaa xilliyada habeenkii ah weeraro gaadma ah ku qaada saldhigyada ciidan ee ku yaalla gobolka Shabeelaha Hoose.Ciidamada huwanta ayaa dhankooda muddooyinkii la soo dhaafay kordhiyey howlgallada ay ka wadaan gobolkaasi, iyagoona Al-Shabaab kala wareegay deegaano hor leh.Soomaaliya 29ka Maarso 2020 Waxaa maanta lagu wadaa inuu dhaqan galo go’aankii ay shalay soo saartay dawladda federaalka ee Soomaaliya, kaas oo ay ku joojisay duullimaadyadii gudaha ee dalka.Dowladda ayaa go’aankeeda waxa ay ku sheegtay inuu qeyb ka yahay dedaallada ay ku doonayso inay ku xakamayso fayraska corona ee dunida ku sii baahaya.Bartimihii bishan ayey aheyd markii dowladda Soomaaliya ay soo saartay go’aan ay laga billaabo 19-ka bishan Maarso ku joojisay dhammaan duullimaadyadi caalamiga ahaa ee dalka tegi jiray ama ka bixi jiray, go’aankaas oo ay dowladuu sheegtay inuu si buuxdo u dhaqangalay.Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar oo BBCda u warramay kaddib markii uu shalay soo saaray amarka joojinta duullimaadyadii guadaha ayaa sababta ku sheegay sidii loo xakamayn lahaa cudurka safmarka ah ee coronavirus.Valueimpression Placeholder“Maanta [oo Sabti ah] waxaan go’aan ku gaarnay si loo xakameeyo cudurka coronavirus oo uusan waddankeenna u soo gelin waa in isu socodka la yareeyo, waxaana lagu yareeyn karaa oo ugu horreeya waa duullimaadyada oo la joojiyo, sidaa awgeed waxaan hakad gelinnay si ku meel gaar ah waddanka gudahiisa. Ujeeddada aan ka leennahay arrintaasi oo keli ah waa xakameynta cudurka coronavirus hadduu ilaahey ka raallo noqdo, ilaahey ha ka raalli noqdee” ayuu yiri wasiir Oomaar.Go’aadnka dowladda ayey tahay in lagu fuliyo wax ka yar 24 saacadood taas oo dhibaato ku keeni karta dadkii markii hore safarradooda sii qorshaystay iyo shirkadaha diyaaradaha, mar aannu umuurtaasi waydiinnayna waxa uu wasiir Oomaar sheegay inay ku dedaalayaan badqabka dadka ay mas’uulka ka yihiin.“Runtii hal maalin oo safar la fasaxo ayaa waxaa ka iman karo wax aad u weyn, marka hadda xilligan aan ku jirno xilli laga hadlo tikidhyo lacagtooda lumay iyo waxaa laga hadlo ma aha waa xilli loo baahan yahay xilli in la isgarab istaago, la isu dulqaato, la fiiriyo danta guud iyo badqabka dadkeenna.” ayuu yiri OomaarWaxaase jira walaac guud oo ku saabsan in go’aankani uu saameyn doono nolol maalmeedka kumannaan Soomaali ah, kuwaas oo isaga kala gooshi jirey caasimadda iyo gobollada.Duullimaadyada gudaha ee Soomaaliya ayaa dad badan oo ah inta awoodda waxa ay u sahleen inay si fudud ugu kala gooshaan magaalooyinka gudaha dalka, maadaama inta badan waddooyinka dalka ay burbursan yihiin, meelaha qaarna aan ammaankooda la isku halayn karin.Duullimaadyada gudaha waxaa aad u adeegsada ganacsatada, shaqaalaha dowladda iyo kuwa hay’adaha, xaaladaha degdega ah ee caafimaadka iyo waxyaabaha la midka ah.Cabdishakuur Macallim Ciise (Albadri) oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, ayaa ku doodaya in duullimaayada si degdega ah loo joojiyay ay dhibaato ku keenayaan xaaladihii degdega ahaa ee loo isticmaali jiray.“Waxyaabaha sida gaarka ah ay u saamaynayso waxaa ka mid ah, xaaladaha degdega ah ee caafimaadka sida qof xanuun uu ku soo booday [maadaama] isbitaallada gobollada aanay u diyaarsanayn inay xaaladaha qaar qaabilaan xaaladaha adag ee caafimaad oo dadka Muqdisho loo soo gudbiyo, iyo iskudhacyada qabiillada oo dhaawacyo culus ay ka dhashaan, kuwaas oo aanan loogaga maarmin diyaaradaha gudaha isaga kala goosha.” ayuu yiri Cabdishakuur.‘Waxaa habboonayd in dadka loo digo’Sidaas oo ay tahayna Cabdishakuur waxa uu ku doodayaa in ay lagama maarmaan ay tahay in dowladdu ay tallaabo qaaddo si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah ee halakeeyay dunidii horumartay.Wasiir Oomaar oo laf ahaantiisa tilmaamay dhibaatada ka dhalan karta duulimaadyada sida degdega ah loo joojiyay ayaa ku adkaystay in ujeedkoodu uu yahay sidii loo dhowri lahaa caafimaadka malaayiinta qof ee Soomaaliya ku nool, taas oo uu sheegay inay tahay waxa ugu wayn ee ay tixgalinayaan.“Sidaas awgeed ayaa inaga oo og iney jiri karaan dad qorsheystay barri iyo saad damababa safraan iyaga oo jira ayaa waxaan go’aan ku gaarnay inaan joojinno sababta oo ah waxaa ka weyn safarka uu qof soo geli karo.” ayuu yiri Oomaar.Balse qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa waxa ay ku doodayaan in ay habboonayd in dadka loo sii digo si ay danahooda u sii dhammaystaan.“Waxaa habboonayd in dowladdu dadka ay digniin sii siiso oo ay dhahdo 10 bari ama 7 bari ama intaas oo maalmood kaddib ayaa la hakin doonaa duullimaadyada, sidaas darteed in dadku ay is aruuriyaan oo inta badan wixii dardaran ay sii hormarsadaan ayaa ka dhalan laheyd, laakiin hadda waqtigu aad buu u koobnaa.” ayuu yiri Cabdishakuur Macallim Ciise.Dowladda Soomaaliya ma aanay shaacin mudada ay socon doonto xayiraadda ay ku soo rogtay duullimaadyada gudaha ee dalka.Xigasho BBChttps://www.youtube.com/watch?v=nqLNL4EcCV4
WARARKA MAANTA 28ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Maxayse Shacabka Muqdisho iyo gobalka Banaadir u heli karin xuquuqdooda? Maxay shacabka Soomaaliyeed u naceen 100% siyaasadda fashilantay ee Madaxweyne Mudane Farmaaajo “Been-Hawaas” mise Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse guddoomiyaasha labada aqal ee sharci-dejinta uga hadlin ciidanka Ethiopia ee sida sharci-darro ah ku soo galay Gedo iyo meelo kale? Maxaa ka dhacay Jaamacada Carabta? Yaa ciidanka Ethiopia dalka Soomaaliya soo geliyey? Yaa xuli doona xildhibaanadaa alabada aqal 2021? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Yaa dalka Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan sannadkii 4raad Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Mise Khaa’inul Waddan Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse laba aqal ee dalka u dhammaystiri waayeen dastuurka dalka muddadii 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxaase Waaaradda Maalliyadda dalka ay u soo taabi weysay lacag Soomaali muddo 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxuuse qaban karaa argagixiye maal-galiye Fahad Yaasiin oo umaleeyey inuu ka takhalusi karo siyaasiyiin Hawiye ee aadka ugu biyo-diiday hab dhaqanka xun ee uu ka dhex wado Hawiye? Maxayse u diidan yihiin in Gobalka Banaadir Iyo Caasimadda Muqdisho hesho xuquuqdeed aasaasiga ah sida goballada kale ee dalka? Yaa diidan xuquuqda gobalka Banaadir Ma Farmaajo mise Kheyre? Maxayse labadii horee ee Madaxweynaaysha ahaa u diideen in xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo caasimadda Muqdisho siiyaan markii ay ahaayeen Madaxweynayaasha waa Madaxweyne Mudane Shiih Shariif Iyo Madaxweyne Xassan Garbuurte? Ha Wiqleyso!
Baraawe 28ka Maarso 2020 Fadeexad ka dhan ah Dowladda Federaalka iyo Maamulka Koonfur Galbeed ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii soo ifbaxday, ka dib markii roobab ka da’ay ay burbur u gaysteen Garoonka Diyaaradaha ee Degmada Baraawe.
Hase yeeshee, waxay noqotay arrin dad badani ka yaabisay burburka xoogan ay roobab da’ay Jimcihii ay u gaysteen Garoonka Baraawe, taa oo muujinaysa inaanan si sax ahi loogu hawlgelin dhismihiisa.
Garoonka oo si macmal uun loo dhisay ayaan hadda ka dib awoodi doonin in ay duulimaadyadu ka deggaan, bacdamaa ay burburtay dhabaha ay diyaaradaha ku cararaan ee bacaadka ahayd.
Adduunka 28ka Maarso 2020 Tirada dadka u dhintay iyo kuwa uu soo ritay cudurka Corona ayaa korortay caalamka, sida ay warisay jaamacadda Johns Hopkins.
Muqdisho 28ka Maarso 2020 Xildhibaan Mahad Salaad ayaa ka hadlay go’aanka ay Dowladda Soomaaliya kula wareegeyso iskuul ku yaalla Muqdisho oo ay maamusho hay’ad Masaari ah.
Caasimada Online si madax banaan uma xaqiijin karto arrinta uu sheegay xildhibaan Mahad Salaad.
Kenya 28ka Maarso 2020 Siyaasiga Faarax Macallin ayaa weerar culus ku qaaday madax goboleedyada Soomaaliya, oo uu ku tilmaamay kuwa “xada hantida” deegaanadooda, wuxuuna si gaar ah usii weeraray kuwa Puntland iyo Jubaland.
Maamilka Dowladda Puntland 28ka Maarso 2020 Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland ayaa sheegaya in maanta gudaha magaaladaasi xalad karantiil ah lagu geliyey dad looga shakiyey cudurka sida fudud ku faafa ee Coronavirus.
Ilo dhanka caafimaad ah ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in dadka la karantiilay oo dhammaan rag ah ay gaarayaan illaa lix qof, kuwaas oo looga shakiyey xanuunka.
Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in dadkaasi oo iyagu iskood u tegay xarumaha caafimaadka laga qaaday baaritaano, si loo ogaado xaaladdooda.
Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in raggaasi ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa, islamarkaana ay dhowaan gudaha u galeen Puntland, gaar ahaan Garoowe.
llaa iyo hadda ma jiro kiis ay shaacisay xukuumadda Puntland, balse waxaa guud ahaan deegaanada maamulkaasi ka jirta cabsi la xariirta faafitaanka cudurkaasi.
Puntland ayaa horay u qaaday tallaabo lagu xakameynayo Corona, iyadoona ku dhawaaqday inay xirtay xuduudaha ay la leedahay Somaliland iyo Itoobiya.
Soomaaliya, gaa ahaan magaalada Muqdisho ayaa waxaa la xaqiijiyey illaa haatan saddex kiis oo la xariira cudurka Coronavirus, kaas oo fara ba’an ku haya caalamka.
Muqdisho 28ka Maarso 2020 Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shaaca ka qaaday inay Somaliland iyo Puntland u direen xirmadii koowaad oo ah qalab looga hortagayo faafitaanka cudurka Coronavirus.Kheyre ayaa sheegay in sidoo kale maamul goboleedyada kale ee dalka ee Galmudug, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle ay ku xigsan doonaan oo iyana ay u diri doonaan agabkan.“Waxaan maanta u dirnay Somaliland iyo Puntland xirmadii koowaad ee qalabka ka hor-tagga Covid-19. Waxaa ku xigi doona Galmudug, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle,” ayuu Kheyre ku yiri qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitter.Kheyre ayaa sheegay in xaddiga uu la eg yahay cudurka Coronavirus ay u baahan tahay taageero dalka oo dhan la gaarsiiyo iyo wada-shaqeyn dhex-marta dhammaan maamullada dalka iyo dowladda dhexe.Kheyre ma bixin wax faah-faahin oo intaas dheer. Hase yeeshee ilo-wareedyo ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa Caasimada Online u sheegay in agabkan uu yahay qeyb ka mid ah kaalmadii Soomaaliya kasoo gaartay ShiinahaDiyaarad sida qalab caafimaad iyo dawooyin loogu tala-galay ka hor-tagga yo in lagula tacaalo cudurka Coronavirus, ayaa talaadadii kasoo degtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.Qalabkan ayaa waxaa qaar ka mid ah dalalka Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya ugu deeqay Jack Ma, oo ah aas-aasaha shirkadaha Alibaba, sidoo kalena ah ninka ugu taajirsan dalka Shiinaha oo cudurkan saf-mareenka ku noqday dunida uu kolkii hore ka dillaacay.Gargaarka ayaa waxaa qayb ka ah qalabka dadka looga baaro cudurka Coronavirus iyo qalabka ay isticmaalaan dhaqaatiirta ka howl gala xarumaha caafimaad iyo goobaha lagu baaro dadka looga shakiyo Caabuqa.
Janaale 28ka Maarso 2020Faah faahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday qarax miino oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed.
Qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu weeraray kolonyo ay la soceen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya.
Al-Shabaab oo war ka soo saartay qaraxaan ayaa sheegatay inay ku gubtay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidanka dowladda, gaar ahaan gaari booyad ah.
Sidoo kale waxa ay tilmaamatay in weerarkaasi ay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiisay ciidamadaasi, walow aysan shaacin tiro rasmi ah.
Dhanka kale ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha ka soo gaaray.
Janaale oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa waxaa dhowaan la wareegay ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Danab, kadib markii ay dagaal la galeen xoogaga Al-Shabaab.
Muqdisho 28ka Maarso 2020 Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa goor dhow shaacisay in beri wixii ka dambeeya dhammaan la joojiyey duulimaadyada gudaha ee isaga kala gooshi jiray Muqdisho goboladda kale ee dalka.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in kaliya duulimaadyada loo ogol yahay diyaaradaha sida gargaarka, siiba kuwooda sida daawooyinka iyo raashinka
Sidoo kale wasaaradda ayaa intaasi ku dartay inuu weli halkiisa yahay amarkii lagu joojiyey duulimaadyada caalamiga, islamarkaana uu sii socon doono illaa amar dambe.
Ugu dambeyn wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa shirakadaha ka shaqeeya duulimaadyada ka dalbatay inay u hoggaasamaaan amarkaasi.
Dowladda Soomaaliya ayaa si guud u wada qorshe ballaaran oo looga hortagayo caabuqa Corona, kaas oo sadex kiis oo ka mid ah laga helay magaalada Muqdisho.
WARARKA MAANTA 27ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Yaa dhaca canshuurta Muqdisho? Maxayse Shacabka Muqdisho iyo gobalka Banaadir u heli karin xuquuqdooda? Maxay shacabka Soomaaliyeed u naceen 100% beenta Madaxweyne Mudane Farmaaajo “Been-Hawaas” mise Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse guddoomiyaasha labada aqal ee sharci-dejinta uga hadlin ciidanka Ethiopia ee sida sharci-darro ah ku soo galay Gedo iyo meelo kale? Maxaa ka dhacay Jaamacada Carabta? Yaa ciidanka Ethiopia dalka Soomaaliya soo geliyey? Yaa xuli doona xildhibaanadaa alabada aqal 2021? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Yaa dalka Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan sannadkii 4raad Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Mise Khaa’inul Waddan Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse laba aqal ee dalka u dhammaystiri waayeen dastuurka dalka muddadii 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxaase Waaaradda Maalliyadda dalka ay u soo taabi weysay lacag Soomaali muddo 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxuuse qaban karaa argagixiye maal-galiye Fahad Yaasiin oo umaleeyey inuu ka takhalusi karo siyaasiyiin Hawiye ee aadka ugu biyo-diiday hab dhaqanka xun ee uu ka dhex wado Hawiye? Maxayse u diidan yihiin in Gobalka Banaadir Iyo Caasimadda Muqdisho hesho xuquuqdeed aasaasiga ah sida goballada kale ee dalka? Yaa diidan xuquuqda gobalka Banaadir Ma Farmaajo mise Kheyre? Maxayse labadii horee ee Madaxweynaaysha ahaa u diideen in xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo caasimadda Muqdisho siiyaan markii ay ahaayeen Madaxweynayaasha waa Madaxweyne Mudane Shiih Shariif Iyo Madaxweyne Xassan Garbuurte? Ha Wiqleyso!
Turika 27ka Maarso 2020 Turkey ayaa ku eedeysay Sacuudi Carabiya inay dunida ka qarisay tirada dadkii tegay cumrada ee laga helay cudurka Coronavirus, taasi oo halis gelisay dadaallada lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaas.
Ingiriiska 27ka Maarso 2020 Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo Magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegayo inuu halkaas cudurka Coronavirus ugu geeriyooday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Salaad.
Marxuum Maxamed Salaad ayaa la xanuunsanayey cudurka Coronavirus, waxaana ugu dambeyntii la xaqiijiyey inuu u geeriyooday cudurkaas.
Waa muwaadinkii afaraad oo u dhashay Soomaaliya oo dalka Ingiriiska ugu geeriyooday cudurkan Coronavirus oo dhibaato xoog leh ku hayo Adduunyada.
Sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in xaaska marxuumka geeriyooday iyo carruurtiisaba ay la xanuunsanayaan cudurkaas inkastoo dhakhaatiirta ay sheegeyn in caafimaadkooda uu fiican yahay.
Guud ahaan tirada Soomaalida la xaqiijiyey ee ku nool ingiriiska kuwaas oo la xanuunsanayo cudurkaan ayaa la sheegay inay gaarayaan illaa 16 qof.
Ra’iisalwasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo wiil uu dhalay oo Daahir lagu magacaabo ayaa ka mid ah Soomaalida London ku nool, ee uu soo ritay Coronavirus.
Boqortooyada UK ayaa laga diiwaangeliyay kiisas gaaraya 11,658 oo caabuqa COVID-19 ah, waxaana ugu dhimatay 578 qof, shalay oo keliyana waxaa ugu geeriyootay 113 ruux.
Maraykanka 27ka Maarso 2020 Dalka Mareykanka oo isku arka inuu yahay dalka ugu awooda badan Caalamka ayaa dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo deg deg ah kadib markii ay soo bateen kiisaska Cudurka Coronavirus ee laga helay dalkaas.
Hargaysa 27ka Maarso 2020 Diyaarad ay leedahay Shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ayaa maanta ka soo dagtay madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal, xili ay Dowladda federaalku ay sheegtay inay duulimaadyada caalamiga ah la joojiyey.
Qatar 27ka Maarso 2020 Dowladda Qatar ayaa safaarad cusub ka dhisaneysa magaalada Muqdisho, taasi oo ah astaan kale oo muujineysa soo kabashada caasimadda Soomaaliya, waxaa sidaas qoray wargeyska Middle East Monitor.
Safaaradda Qatar ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay noqoto tan labaad ee ugu weyn ee Soomaaliya, kadib midda Turkish-ka.
Middle East Monitor, ayaa warka dhismada safaaradda cusub kasoo xigatay sarkaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Axmed oo sawirada naqshadda safaaradda ku shaaciyey Twitter.
Qatar ayaa sanaddii 2019 waxay Soomaaliya ka billowday fulinta mashruucyo horumarineed oo dhowr ah.
Qatar ayaa dhiseysa dekedda cusub ee magaalada Hobyo, taasi oo loo arko maal-gelin ballaaran oo ay ku sameysaneyso mid ka mid ah dekedaha Soomaaliya ee ay ku loolamayaan dalalka Khaliijka.
Qatar ayaa loo arkaa dowladda ugu dhow ee saaxiibka la ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Muqdisho 27ka Maarso 2020 Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ugu hambalyeeyay guusha Xukuumadda ay gaartay oo ah in Soomaaliya ay ka soo gudubtay wajigii 3aad ee geeddi socodka deyn cafinta.
Qaramadda Midooway 27ka Maarso 2020 Wasiirkii hore ee Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook kula wadaagay shacabka xog ku saabsan barnaamijka deyn-cafinta Soomaaliya, oo uu ka mid ahaa dadkii soo billaabay. Hoos ka aqriso qoraalka.
Muqdisho 27ka Maarso 2020 Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in shaqaale ka mid ahaa qandaraaslayaasha ka howlgalla xerada Xalane laga helay cudurka coronavirus (COVID-19). Wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Drs. Fowsiyo Abiikar ayaa sidoo kale xaqiijiyay kiiskaan, iyadoo sheegtay inuu yahay shaqaale ajnebi ah oo soo maray waddamo uu cudurka si aad ah ugu faafay.
WARARKA MAANTA 26ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Meeqo sanno ayaa shacabka lagu maameelinayaa deyntii waa la cafiyey ayadoo wax lacag Soomaali aysan dalka ka dhex shaqayn? Maxay taha lacag ay xukuummadda fashalntay ku dhex isticmaasho #Muqdisho? Yaa ciidanka Ethiopia ogolaaday inay Soomaaliya dib u soo galaan si ay u gumaadaan shacabka Soomaaliyeed Ma Madaxweyne Farmaaajo “Been-Hawaas” mise Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse guddoomiyaasha labada aqal ee sharci-dejinta uga hadlin ciidanka Ethiopia ee sida sharci-darro ah ku soo galay Gedo iyo meelo kale? Maxaa ka dhacay Jaamacada Carabta? Yaa ciidanka Ethiopia dalka Soomaaliya soo geliyey? Yaa xuli doona xildhibaanadaa alabada aqal 2021? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Yaa dalka Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan sannadkii 4raad Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Mise Khaa’inul Waddan Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse laba aqal ee dalka u dhammaystiri waayeen dastuurka dalka muddadii 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxaase Waaaradda Maalliyadda dalka ay u soo taabi weysay lacag Soomaali muddo 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxuuse qaban karaa argagixiye maal-galiye Fahad Yaasiin oo umaleeyey inuu ka takhalusi karo siyaasiyiin Hawiye ee aadka ugu biyo-diiday hab dhaqanka xun ee uu ka dhex wado Hawiye? Maxayse u diidan yihiin in Gobalka Banaadir Iyo Caasimadda Muqdisho hesho xuquuqdeed aasaasiga ah sida goballada kale ee dalka? Yaa diidan xuquuqda gobalka Banaadir Ma Farmaajo mise Kheyre? Maxayse labadii horee ee Madaxweynaaysha ahaa u diideen in xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo caasimadda Muqdisho siiyaan markii ay ahaayeen Madaxweynayaasha waa Madaxweyne Mudane Shiih Shariif Iyo Madaxweyne Xassan Garbuurte? Ha Wiqleyso!
Muqdisho 26ka Maarso 2020 Soomaaliya ayaa gaartay marxaladdii koowaad ee dadaalka ay dooneyso in deynta looga cafiyo, taasi oo loo yaqaan Decision Point, oo macnaheedu yahay inay u qalanto in deynta-laga cafiyo, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay IMF iyo Banka Adduunka.
Dowladda Soomaaliya ayaa saddexdii sano ee tagtay shacabka u sheegeysay in bishan laga cafinayo deynta, taasi oo ah arrin aan sax ahayn, waxayna hadda un buuxisay marxaladdii koowaad ee u qalmidda deyn-cafin, sida ku cad qoraalka IMF iyo Bankiga Adduunka. Si Soomaaliya looga cafiyo deynta, waa inay dhameystirtaa marxaladda Completion Point
Raskaanbooni 26ka Maarso 2020 Waxaa galabta qarax miino loogu xiray lagu dilay guddoomiyihii deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in sida lagu ogaaday baaritaano hor dhac ah, qaraxa lagu guddoomiyaha uu ahaa miino lagu aasay wadada, isla markaana ay socdaan baaritaano ku aadan cidii ka dambeysay qaraxaa
Hay’adda Xuquuqda Aaadanaha 26ka Maarso 2020 Tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya 28-kii bishii January shaacisay in uu Cabdirashiid Janan ka baxsaday xabsi ah ku hayeen, waxaa isasoo tareysay hadal-heynta ku saabsan sida ay arrintaas ku dhacday.
Maamulka Dowladda Jubbaland 26ka Maarso 2020 Madaxweyne ku xigeenka 1-aad ee maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wada-hadal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Nairobi.
Muqdisho 26ka Maarso 2020 Taliyaha qeybta 60-aad ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, Sareeya Guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo booqday deegaanka Deynuunaay ee gobolka Baay oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo dagaalyahannada Xarakada Al-Shabaab ayaa ka warbixiyey xaaladda deegaankaasi.
Ugu horreyn wuxuu sheegay in xaaladdu ay dagan tahay, islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay howlgallo amni xaqiijin ah ka wadaan halkaasi.
Sidoo kale wuxuu guullo ka sheegtay dagaalladii shalay ka dhacay deegaanka Deynuunay, kadib markii ay weerar culus ku qaaday kooxda Al-Shabaab.
Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa tilmaamay in ciidamada dowladda ay ka war hayeen xogta weerarkaasi, islamarkaana ay ka hortageen, sida uu hadalka u dhigay.
Taliyaha qeybta 60-aad ee ciidanka Xoogga dalka ayaa intaasi ku sii daray in halkaasi ay ku dileen illaa 12 xubnood oo ka tirsanaa Xarakada Al-Shabaab.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inay laba jibaari doonaan dhaq dhaqaaqyada milatari ee Al-Shabaab looga saarayo gobollada Baay & Bakool ee K/ Soomaaliya.
WARARKA MAANTA 25ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Yaa ciidanka Ethiopia ogolaaday inay Soomaaliya dib u soo galaan si ay u gumaadaan shacabka Soomaaliyeed Ma Madaxweyne Farmaaajo “Been-Hawaas” mise Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse guddoomiyaasha labada aqal ee sharci-dejinta uga hadlin ciidanka Ethiopia ee sida sharci-darro ah ku soo galay Gedo iyo meelo kale? Maxaa ka dhacay Jaamacada Carabta? Yaa ciidanka Ethiopia dalka Soomaaliya soo geliyey? Yaa xuli doona xildhibaanadaa alabada aqal 2021? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Yaa dalka Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan sannadkii 4raad Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Mise Khaa’inul Waddan Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse laba aqal ee dalka u dhammaystiri waayeen dastuurka dalka muddadii 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxaase Waaaradda Maalliyadda dalka ay u soo taabi weysay lacag Soomaali muddo 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxuuse qaban karaa argagixiye maal-galiye Fahad Yaasiin oo umaleeyey inuu ka takhalusi karo siyaasiyiin Hawiye ee aadka ugu biyo-diiday hab dhaqanka xun ee uu ka dhex wado Hawiye? Maxayse u diidan yihiin in Gobalka Banaadir Iyo Caasimadda Muqdisho hesho xuquuqdeed aasaasiga ah sida goballada kale ee dalka? Yaa diidan xuquuqda gobalka Banaadir Ma Farmaajo mise Kheyre? Maxayse labadii horee ee Madaxweynaaysha ahaa u diideen in xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo caasimadda Muqdisho siiyaan markii ay ahaayeen Madaxweynayaasha waa Madaxweyne Mudane Shiih Shariif Iyo Madaxweyne Xassan Garbuurte? Ha Wiqleyso!
Muqdisho 25ka Maarso 2020 Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa maanta markale soo saartay fariin ku aadan dadka safraya, gaar ahaan kuwa ku socdaalaya dhulka ama badda, maadaama la joojiyey duulimaadyada caalamiga.
Sidoo kale waxa ay ku baaqday in qofka uu dib u dhigo safarada gudaha, haddii uu isku arki calaamadaha hargabka, sida qadho, qunfac ama diif.
Dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaallo guud oo lagula dagaalamayo cudurkaan, iyadoo xalay qalab muhiim ah ka guddoontay safiirka Shiinahau jooga Soomaaliya.
Mudug 25ka Maarso 2020 Wararka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay iska hor imaad u dhexeeyey maleeshiyaad hubeysan iyo ciidanka ammaanka maamulka Puntland uu ka dhacay waqooyiga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi.
Dagaalka ayaa yimid, ka gadaal markii kooxda maleeshiyada ah ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen taliye ku xigeenka xabsiga waqooyiga Gaalkacyo iyo ilaaladiisa.
Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadka hubeysan ay doonayeen inay xoog ku soo furtaan nin maxbuus ah oo la sheegay inuu ku dhex xanuunsaday xabsiga, kaas oo la socday gaariga la rasaaseeyey, lana rabay in lagu geeyo xarun caafimaad, si loogu dabiibo.
Kooxda weerarka fulisay ayaa sidoo kale wararku waxa ay sheegaan inay ay ehel la’yihiin ninka maxbuuska ah oo ay horay Puntland ugu xukuntay dil toogasho ah.
Inta la xaqiijiyey waxaa is-rasaaseyntaasi ku dhaawacmay illaa afar qof oo uu ku jiro taliye ku-xigeenka xabsiga waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Sidoo kale ilo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in ragga weerarka qaaday ay si xoog ah markii dambe ku kaxeysteen maxbuuska ay doon-doonayeen.
Dhinaca kale ma jiro illaa iyo hadda wax faah faahin ah oo saraakiisha laamaha amniga ay ka bixiyeen shaqaaqadaasi.
Xaaladda ayaa saaka degan, base ciidamada Puntland ayaa haatan xaafado ka tirsan waqooyiga Gaalkacyo ka wada howlgallo baaritaano ah.
Maamulka Dowladda Galmudug 25ka Maarso 2020 Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug Axmed Cabdi Qoor Qoor ayaa bilaabay inuu heshiis la galo xildhibaanada iyo dhamaan dadka diidan maamulkiisa.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegaya in heshiis muhiim ah ay galeen Madaxweyne Qoor iyo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo diidanaa doorashadii Dhuusarameeb.
Waxyaabaha ay dhinacyadu isku afgarteen ayaa waxaa kamid ah.
1) – In xildhibaanada mucaaradka ah ay ka qeyb galaan Caleema saarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo dhawaan la filayo in lagu qabto Dhuusamareeb.
2) – In dhinacyadu kawada shaqeeyaan danaha Galmudug ayna xildhibaanada ka qeyb qaataan dib u heshiisinta siyaasinta gobalka iyo hogaanka maamulka.
3) – Iyo madaxweyne Qoor Qoor oo Xildhibaanada u balan qaaday in uu kala shaqeyn doono sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen baarlamanka Soomaaliya oo lix bil kadib waqtigiisu dhamaanayo, lana filayo in dib looga soo doorto Galmudug.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa sidoo kale heshiis la galay Madaxweynihii ka horeeyay ee Xaaf waxaana la filayaa inuu xaliyo tabashada hogaanka Ahlu-Sunna, sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah.
Masuuliyiin badan oo daneeya arrimaha Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa dhaq dhaqaaqyada Qoor Qoor ku tilmaamay mid isu keeni kara Galmudug meeshana ka saari kara dib u dhaca gobalka.
Gedo 25ka Maarso 2020 Maalmihii la soo dhaafay waxaa aad loo hadal haayay in ciidamo Itoobiyahaan ah ay ka soo gudbeen xadka Soomaaliya iyo Itoobiya islamarkaana ay soo gaareen gobalka Gedo.
Maamulka Dowladda Puntland 25ka Maarso 2020 War ka soo baxay wasaaradda cadaalada Puntland ayaa lagu sheegay inay ka laabatay amaradii horay uga soo baxay ee ku aadanaa in la xiro maasjiyadda iyo dugsiyada lagu barto Qur’aanka Kariimka ee maamulkaasi.
Qoraalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in arrintaan ay wadatashiyo kala sameysay Culimada iyo qeybaha bulshada, islamarkaana ay dib u eegis ku sameysay go’aankii hore, kadib talooyin ka yimid Culimada, Macalimiinta iyo mu’adimiinta.
Wasaaradda ayaa shaacisay in dhinacyadaasi ay isku raaceen in aan la xirin masaajidda balse laga shaqeeyo nadaafadda goobahaasi, si looga hortgago Coronavirus.
Sidoo kale wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in la’isla gartay in gabi ahaan la xiro Musqulaha iyo meelaha lagu weesaysto, si loo ilaaliyo nadaafadda guud.
Puntland ayaa horay u soo saartay amaro lagu xirayo dhamaan goobaha waxbarashada iyo meelaha isu imaatinka dadka, si loo xakameeyo COVID19.
Soomaaliya ayaa horay ugu dhawaaqday in hal kiis oo ka mid ah xanuunkaan laga helay magaalada Muqdisho, gaar ahaan muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibaddiisa.
Muqdisho 25ka Maarso 2020 Waxaa shalay ilaa maanta aad loo hadal hayaa xiisad ka dhalatay ciidamo la sheegay in lagu arkay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, oo Madasha Xisbiyada Qaran iyo Wasaaradda Amniga Soomaaliya ay siyaabo kala duwan uga hadleen.
Haddaba Caasimada Online ayaa la hadashay saraakiil amni oo ka tirsan booliska, waxna ka weydiisay sida ay wax u dhaceen, kuwaas oo sheegay in waxa dhacay oo dhan ay yihiin is-faham waa.
Sweden 25ka Maarso 2020 In ka badan 30 qof oo dalka Sweden ugu geeriyootay cudurka Coronavirus ayaa waxaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ku noolaa dalkaas.
Muqdisho 25ka Maarso 2020 Diyaarad sida qalab caafimaad iyo dawooyin loogu tala-galay ka hor-tagga yo in lagula tacaalo cudurka Coronavirus ayaa caawa kasoo degtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Maamulka Dowladda Puntland 25ka Maarso 2020 Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni , ayaa safar aan la shaacin wuxuu muddo todobaad ku dhow ku joogaa magaalada xeebeedka qadiimiga ee Eyl ee kutaala badweynta Hindia.
WARARKA MAANTA 24ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Maxaa ka dhacay Jaamacada Carabta? Yaa ciidanka Ethiopia dalka Soomaaliya soo geliyey? Yaa xuli doona xildhibaanadaa alabada aqal 2021? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Yaa dalka Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan sannadkii 4raad Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Mise Khaa’inul Waddan Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse laba aqal ee dalka u dhammaystiri waayeen dastuurka dalka muddadii 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxaase Waaaradda Maalliyadda dalka ay u soo taabi weysay lacag Soomaali muddo 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxuuse qaban karaa argagixiye maal-galiye Fahad Yaasiin oo umaleeyey inuu ka takhalusi karo siyaasiyiin Hawiye ee aadka ugu biyo-diiday hab dhaqanka xun ee uu ka dhex wado Hawiye? Maxayse u diidan yihiin in Gobalka Banaadir Iyo Caasimadda Muqdisho hesho xuquuqdeed aasaasiga ah sida goballada kale ee dalka? Yaa diidan xuquuqda gobalka Banaadir Ma Farmaajo mise Kheyre? Maxayse labadii horee ee Madaxweynaaysha ahaa u diideen in xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo caasimadda Muqdisho siiyaan markii ay ahaayeen Madaxweynayaasha waa Madaxweyne Mudane Shiih Shariif Iyo Madaxweyne Xassan Garbuurte? Ha Wiqleyso!
Gedo 24ka Maarso 2020 Maamulka Gobolka Gedo ee hoosyimaada Dowladda Federaalka ayaa is bedel ku sameeyay Gudoomiye-yaashii Degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo ee Gobolkaasi Gedo.
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji (Macalimow) ayaa sheegay in uu isagu is bedelkan ku sameeyay Maamuladii Degmooyinkaasi.
Gudoomiye Kuxigeenka oo ka amarqaata Dowladda Federaalka ayaa sheegay in fekradaha bulshada ku dhaqan saddexdaasi degmo, ay ku saleeyeen is bedelkan.
Waxa kaloo uu sheegay in is bedelka uu ku dhisan yahay waxa uu ugu yeeray Nidaamka Dowliga ah, isla-markaana uu is bedelku yahay mid sharci ah
Cismaan Nuur Xaaji oo u waramay Laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa xusay in Gudoomiye-yaashii hore ee degmooyinkaasi, ay ku soo bedeleen Gudoomiye-yaal kaloo cusub, inkastoo aanu magacyadoodu sheegan kuwa cusub.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horey loogu eedeeyay in Gobolka Gedo ay ka go’doomineyso Jubbaland inteeda kale.
Muqdisho 24ka Maarso 2020 Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa xaqiijiyey in wafdi ka socday Masar ay Axadii lasoo dhaafay ka dageen magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho.
Cawad oo wareysi siiyey Warbaahinta Daljir ayaa qiray in ujeedka booqashadda wafdigaas uu daaranaa khilaafka Masar iyo Itoobiya ee ku aadan biyo-xireenka lagu muransan yahay ee Webiga Nile.
“Haa,” ayuu ku jawaabay markii la waydiiyey xaqiiqada booqashada. “Dalalka aduunka ayay ku wareegayeen, waxay macneynayeen mowqifkooda ku aadan Webiga Niil, khilaafka iyaga iyo Itoobiya u dhaxeeya”.
Warar soo baxay ayaa sheegay in Muqdisho ay taageertay qaraarkaas, balse wasiir Cawad oo meesha ka saarey warbixinadaas wuxuu hoosta ka xariiqay in ay ka qaateen go’aan dhexdhexaad ah.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo tibaaxay in “la qariyey”socdaalka wafdiga Masar, ayaa rumeysan in dowladda ay taageerada ka noqotay kadib cadaadis kaga yimid Itoobiya.
Ra’iisul wasaare Khayre oo kadib u socdaalay Itoobiya ayaa dhigiisa Abiy Axmed “ku wareejiyey fariin uu ka sidday madaxweyne Farmaajo taasoo ahayd in Soomaaliya ay dhex ka tahay xiisaddaas”.
Hargaysa 24ka Maarso 2020 Diyaarada Ethiopian Airlines, ee dowladda Itoobiya ayaa maanta markale ku kacday talaabo ka dhan ah Amaradii dowladda federaalka.
laa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan diyaaradan maanta ka degtay madaarka magaalada Hargeysa, ee jabisay amaradeedii.
Muqdisho 24ka Maarso 2020 Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa shalay sheegay inay Soomaaliya dhex-dhexaad ka tahay khilaafka xoogan ee u dhexeeya labadaasi dal.
Muqdisho 24ka Maarso 2020Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo u warramay Idaacadda Mustaqbal ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug.
Xildhibaanka ayaa wareysigaan ku sheegay in marxalado adag laga soo maray dhismaha Galmudug, islamarkaana loo baahan yahay in la adkeeyo midnimadeeda.
Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in weli deegaanada Galmudug uu yaallo hub iyo gaadiid fara badan, dadkuna aysan ka gaarin heshiis dhameystiran.
“Galmudug waa deegaan hub iyo gaadiid badan uu yaallo, dadkiisu heshiis dhameystiran kama gaarin dhismaha Maamul ay ku mideysan yihiin si ay wax isugu darsadaan, duruufta dhaqaale oo intaa u dheereed waxa ay sababtay in uusan shaqeyn Maamulka.“ xildhibaan sare Cabdixakiin Macalin Axmed oo door firfircoon ku lahaa dhismaha Galmudugta cusub
Dhanka kale wuxuu ku baaqay in aan la carqaladeyn maamulka curdunka ah ee hadda jira, oo uu tilmaamay in la wada taageersan yahay, sida uu hadalka u dhigay.
“Marxaladda cusub ee ah Galmudug isla socoto oo inta badan dadku wada taageersan yihiin waa horumar la gaaray, haddii maamulka uusan ku tiirsaneen Dowladda dhexe ama Beesha Caalamka ma dhaqaaqi karo, waxaana aaminsanahay in dadka ay ugu faaiideeyaan fursadda wanaagsan ee Dowladaha akteeda yaalla” ayuu markale yiri xildhibaanka
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo dhowaan la filayo in si rasmi ah loo caleema saaro madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor).
Muqdisho 24ka Maarso 2020Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka hortageen weeraro ay dgaalyahannada Al-Shabaab qorsheynayeen inay ka geystaan qeybo ka mid ah gobollada Baay iyo Bakool.
Taliyaha qeybta 60-aad ee ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, Janaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka war hayeen xogta weeraradaasi, islamarkaana inta aan la fulin ay fashiliyeen, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyey in dagaalyahannada Al-Shabaab ay doonayeen in weeraradaasi ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah,
Janaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa sidoo kale intaasi ku daray in lala damacsanaa weeraradaan deegaanada Buur-Eyle, Walag iyo Xawaal Barbaar.
“Al-Shabaab waxa ay isku dayeen in ay soo wareeraan saldhigyo aynu ku leenahay deegaanno ay kamid tahay Buur Eeylo, dad shacab ah ayay ku dhibaateynayeen, waxaana ka qabsanay Xoolo ay dad kasoo qaadeen oo ay doonayeen in ay dad kale siiyaan, waxaana u celinay dadkii lahaa.” taliyaha qaybta 60-aad ee ciidanka Xoogga.
Dhinaca kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi.
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalmihii u dambeeyey ciidamada huwanta ay sare u qaadeen dhaq dhaqaaqyada milatari ee ka socda gobollada dhaca koonfurta Soomaaliya.
Muqdisho 24ka Maarso 2020 Ciidamada NISA ayaa gacanta waxa ay ku soo dhigeen Shabakad Al-Shabaab u sameeya Documentiyo been abuur ah, kuwaasi oo lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed.
NISA ayaa waxa ay sheegtay xogo ay ka heleen shacabka Somaliyed in lagu soo ogaaday dadkaan warqadaha been abuurka u sameyn jiray Al-Shabaab.
Raggaan ayaanan la sheegin rasmi ahaan meesha laga soo qabtay, balse wararka waxa ay sheegayaan in xubnahan laga soo qabtay Suuqa Bakaaraha oo warqadaha Been abuurka ay ku sameyn jireen.
Raggaan oo Saddex nin ah ayaa waxaa gacanta ku haayo Nabad Suggida Somaliya, waxaana ay ku xiran yihiin godka Jilacow.
WARARKA MAANTA 23ka Maarso 2020
Su’aallaha Maanta: Goorma ayaa la weerari doona guriga Madaxweynihii hore Mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed? Maxay tahay sababta uu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo “Been-Hawaas” inuu amro in la weeraro guriga Madaxweynihii hore Mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed Iyo guriga Madaxweynihii hore Mudane Xassan Shiikh Maxamuud oo ka biidsan sida khaldan ee uu Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal Wasaare Mudane Kheyre ugu fashilmeen hoggaanka dalka #Soomaaliya? Yaa xuli doona xildhibaanadaa alabada aqal 2021? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2021? Yaa dalka Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan sannadkii 4raad Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” Mise Khaa’inul Waddan Raysal Wasaare Mudane Kheyre “Bakhti-Raam-Sade”? Maxayse laba aqal ee dalka u dhammaystiri waayeen dastuurka dalka muddadii 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxaase Waaaradda Maalliyadda dalka ay u soo taabi weysay lacag Soomaali muddo 3da sanno ee la soo dhaafay? Maxuuse qaban karaa argagixiye maal-galiye Fahad Yaasiin oo umaleeyey inuu ka takhalusi karo siyaasiyiin Hawiye ee aadka ugu biyo-diiday hab dhaqanka xun ee uu ka dhex wado Hawiye? Maxayse u diidan yihiin in Gobalka Banaadir Iyo Caasimadda Muqdisho hesho xuquuqdeed aasaasiga ah sida goballada kale ee dalka? Yaa diidan xuquuqda gobalka Banaadir Ma Farmaajo mise Kheyre? Maxayse labadii horee ee Madaxweynaaysha ahaa u diideen in xuquuqda Gobalka Banaadir Iyo caasimadda Muqdisho siiyaan markii ay ahaayeen Madaxweynayaasha waa Madaxweyne Mudane Shiih Shariif Iyo Madaxweyne Xassan Garbuurte? Ha Wiqleyso!
Afgooyo 23ka Maarso 2020 Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka Lafoole lagu dilay taliyihii booliiska ee magaalada Afgooye.
Jarmalka 23ka Maarso 2020 Dalka Jarmalka waxaa uu ka mid yahay dalalka ku yaal qaaradda Yurub ee la daalaa dhacaya dhibaatada ka dhalatay xanuunka safmarka ah ee corona ee faraha ba’an ku haya dalal ka badan 150.
Dalkaas Jarmalkana waxaa ku nool Soomaali badan kuwaas oo qaar ka mid ah la sheegayo in laga helay cudurka Corona. Waxaa dadkaas ka mid ah Maxamed Cabdi Jaamac, oo ku nool magaalada Hamburg ee waddankaas, oo ka hadlay wadada uu maray markii cudurkan lagu sheegayay.
“Isbitaalkii baan tagay dhacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafadaan iska aaday oo annagaa ku soo wacayno ayey dhaheen, ileen jawaabta waxa ay qaadanaysaa 24 saacadood, marka waxyar bay kuu dhiibayaan guuntaad iska galinaysaa waad ku celinaysaa, annagaa ku soo wacayno ayey igu dhaheen oo numbar ayey iga qorteen, hadda dhaw bay isoo waceen oo cudurkii baad qabtaa bay igu dhaheen, laba todobaad waa inaad gurigaaga joogtaa oo aadan bixin,” ayuu yiri Maxamed oo la hadlay BBC-da.
Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay calaamadaha uu isku arkay ka hor inta uusan baaritaanka samayn: “Waxaan isku arkay riiraxyo iyo dhuunta oo i xanuunayso, kabacdi hergab inuu yahay baan aaminay, waxaan dareemay wareer, dhegaha oo i xanuunaya, labada dhafoor oo aad ii xanuunaya, tabar darro qufac iyo qandho aan jirkayga ka baxayn.” ayuu yiri Maxamed.
“Dad badan baan aqaanaa oo kow iyo laba iyo saddex midna aan ahayn oo magaalada ila joogo oo dhalinyara ah oo Soomaali ah oo isnaqaanno oo kuligood wada qandhan oo qufacaya, oo ku dhahayo calaamadahaas lagaa helay annagana waan dareemaynaa aanan rabinna inay isbitaalka aadaan.” ayuu yiri Maxamed Cabdi.
NewsWeek 23ka Maarso 2020 Wargeyska Newsweek ee dalka Mareykanka ayaa warbixin uu qoray ku iftiimiyey in dhaqaatiirta adduunka ay bilaabeen inay ku baaqaan taladii uu Rasuulka SCW uu sheegay 1400 sano ka hor, taasoo looga hortagayo cudurada faafa.
Maamulka Dowlad Gobaleedka Puntland 23ka Maarso 2020 Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa si adag uga jawaabay hadal maanta kasoo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) oo labada Aqal ee baarlamanka Soomaaliya ka dalbatay in ay dedejiyaan meel marinta dib u eegista sharciga xisbiyada ee dalka.
Qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in hadalka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu yahay mid looga hordhacayo dadaallada ay wado Puntland.
Sidoo kale qoraalka Puntland ayaa lagu sheegay warka kasoo baxay guddiga doorashooyinka lagu fashilinayo gogosha wadahadal ee Madaxweynaha Puntland uu iclaamiyey, taas oo la dhigay magaalada Garowe, kadib shirkii wadatashiga Puntland.
“Guddiga Doorashada DFS hadalka ay hadda soo jeediyeen ma aha mid sharci waa-hore la ansixiyey lagu taageerayo, ee waxaan u arkaa mid looga hordhacayo dadaalada ay Puntland wado, laguna fashilinayo gogosha wadahadal ee Garoowe la dhigay”ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale warkan kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay hadalka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu ka dhiganyahay tallaabadii labaad ee lagu hor istaagayo gogosha uu fidiyey Madaxweyne Deni, kadib hadalkii maalin ka hor kasoo yeeray wasiirrada federaalka ee ka qeyb galay shirkii wadatashiga ee ka dhacay Garowe.
“Waa tallaabo labaad oo jid-gooyo ah, marka laga soo tago warsaxaafadeedkii ay Wasiiradu qabteen” ayaa lagu yiri jawaabta Madaxweyne Deni.
Guddoomiyaha Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) oo maanta shir jaraa’id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa labada gole ee Baarlamaanka federalka Soomaaliya ka dalbatay in ay dadajiyaan meel marinta dib u eegista sharciga xisbiyada si ay ugu gudbaan xisbiyo sax ah oo ay kumeel gaarnimada uga soo gudbaan ugana qeyb galaan doorashada 2020-2021-ka.
Guddoomiye Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in xisbiyada sida kumeel gaarka ah isku diiwaan galiyey ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay si ay ugu gudbaan xisbi rasmi ah. Iyadoo shacabka Soomaaliyeed ka dalbatay in ay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo hergalinta howlaha muhiika u ah doorashada la filaayo in dabayaaqada sanadkan ay ka bilaawdaan dalka
Muqdisho 23ka Maarso 2020 Waxaa soo baxaya dood ku saabsan sida loo soo xulayo ciidan ku jira Milateriga Soomaaliya oo loo qaadayo tababar muhiim ah oo ka dhacaya dalka dibadiisa.
Khilaafkaan ayaa salka ku haayo in ciidanka loo soo xulo qaab ku saleysan qabiil iyo in loo soo xulo nidaam kale oo u degsan ciidanka qaranka, gaar ahaan wasaaradda difaaca, balse waxaa diidan haweeney ka tirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Tababarka ciidankaan oo ah mid casri islamarkaana ay ka faa’iideysan doonaan tiro kooban ayaa la qorsheeyay inuu dhawaan dibadd ka dhaco balse waxaa dib u dhigay dood taagneed iyo cudurka Coronavirus, waxayna wararku sheegayaan in loo qaadi lahaa Turkiga halka warar kalane ay sheegayaa in loo qaadi lahaa Ruushka oo muddo dheer kadib billaabaya tababarka saraakiisha ciidamada Soomaaliya.
“Haweeney xafiiska ra’iisul wasaaraha ka tirsan oo ciidamada qaabilsan waxay dalbatay in iyada ay soo xusho halka taliyaha xoogga uu diiday waxayna arrintu u gudubtay ra’iisal wasaaraha iyo madaxweyanha,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan xarunta taliska Xoogga ee Gaashaandhiga Soomaaliya.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay ka dhamaan la’a khilaaf iyo muran kala dhaxeeya xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyr
Ethiopia 23ka Maarso 2020 Dowladda Itoobiya ayaa si weyn uga xumaatay qaraar uu dhowaan Ururka Jaamacadda Carabtu uu ka soo saaray Xiisada Nile-ka ee kala dhaxeysa dalka Masar, oo ay qeyb ka ahaayeen Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti.
Maamulka Dowladda Puntland 23ka Maarso 2020 Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland, Mudane Axmed Muuse Nuur ayaa ka hadlay dil xalay waqooyiga Gaalkacyo loogu geystay xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee magaaladaasi.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Muqtaar Axmed Cumar (Tinle), iyadoona dilkiisa ay fuliyeen rag ku hubeysnaa bistoolado oo goobta isaga baxsaday.
Axmed Muuse Nuur oo wareysi siiyey Idaacadda Mustaqbal ayaa sheegay in marxuumka uu sidoo kale ahaa ganacsade, islamarkaana ay dishay gacan ka xaq-daran.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay haatan ku raad-joogaan raggii ka dambeeyey toogashada, islamarkaanawadaan baaritaano dheeri ah.
“Muqtaar waxa uu ahaa Xildhibaan, sidoo kale waa Ganacsade, waxaa dishay Gacan ka xaq daran, waxaana dilkiisa ka dambeeyo dad caadeystay beegsiga dadka Bulshada wax u qabta, balse Ciidamada ammaanka ayaa ku daba-joogo oo aan ka quusan doonin soo qabashada gacan ku dhiiglayaasha” ayuu wareysigaan ku yiri guddoomiyaha Mudug.
Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ragga dilka geystay ee hadda la raadinayo ay dhaawaceen askari ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee maamulka Puntland.
Ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid liitay, waxaana ka dhacayey falal liddi ku ah amniga oo u badan dilal qorsheysan.